Ukudlula kumaBlockers: Ungazibona Kanjani Izikhangiso Zakho, Uchofoze, bese Wenza | Martech Zone
NgoMsombuluko, Mashi 19, 2018 UJeff Kupietzky
Ezimweni zokumaketha zanamuhla, kuneziteshi eziningi zemidiya kunanini ngaphambili. Ngasohlangothini oluhle, lokho kusho amathuba amaningi wokukhipha umyalezo wakho. Ohlangothini olungezansi, kunomncintiswano omkhulu kunanini ngaphambili wokuthwebula ukunaka kwezilaleli.
Ukwanda kwemidiya kusho izikhangiso eziningi, futhi lezo zikhangiso zingena kakhulu. Akusona nje isikhangiso sokuphrinta, ukuthengisa kwe-TV noma komsakazo. Yizikhangiso ezigcwele ezigcwele ezi-inthanethi ezikwenza ukuthi uthole u- “X” ongazukususwa, ama-auto-play amavidiyo azobekezelelwa ngaphambi kokubona okuqukethwe okufiswayo, izikhangiso ze-banner ezivela kuyo yonke indawo, kanye nezikhangiso ezikulandelela ngokufuna kabusha, kusuka kukhompyutha uye kudivayisi yeselula futhi ubuye futhi.
Abantu sebekhathele noma ikuphi ukukhangisa. Ngokuya ngocwaningo lweHubSpot, abantu abaningi bathola ukuthi izikhangiso eziningi ziyabheda noma ziyaphazamisa, azisebenzi kahle noma ziyathuka. Okuveza kakhulu abakhangisi ukuthi lezi zinhlobo zezikhangiso zinikeza ababukeli umbono ongemuhle ngamawebhusayithi ababaholela kuwo kuphela kodwa futhi imikhiqizo eziyimele. Ngakho-ke ukutshalwa kwezimali kwakho kokuthengisa kungahle kube nomthelela ophambene kubantu kunalokho obekuhlosile; kungakha isithombe esibi ngomkhiqizo wakho kubantu, kunokuba kube nesivumayo.
Izikhangiso eziningi, ukukhungatheka okungaphezulu: Faka izivimbeli zesikhangiso
Akumangalisi ukuthi abantu bathole indlela ezungeze ukukhungatheka kwebhomu lamanje lokukhangisa: izandiso zokuvimbela izikhangiso. Ngokombiko wakamuva we-PageFair & Adobe, Abasebenzisi be-Intanethi abayizigidi ezingama-198 basebenzisa izivimbeli zezikhangiso ukuvimbela izimoto zokumaketha zedijithali ezingenayo ezinjengezibhengezo, izigelekeqe nezikhangiso ezisemgqeni ukuthi zingaveli kumawebhusayithi abawathandayo nakuma-social media, futhi ukusetshenziswa kwezikhangiso kuvimbela ngaphezu kuka-30% onyakeni odlule. Ukuvinjelwa kwezikhangiso kuvame ukuthinta noma yikuphi kusuka ku-15% - 50% womgwaqo womshicileli wewebhusayithi, futhi kujwayelekile ikakhulukazi kumasayithi wemidlalo, lapho izethameli zisebenza kahle kakhulu futhi zikwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe bokuvimbela izikhangiso.
Ngakho-ke yini umkhangisi okufanele ayenze?
Abakhangisi abafuna "ukudlula izivimbeli zezikhangiso" bangamangala lapho bethola ukuthi kunendlela ethile engabasiza ukuthi bagweme lo mkhuba ovimba izikhangiso, futhi akuwona umkhuba osetshenziswa ezinkundleni zokuxhumana. I-imeyili. Cabanga ngalokhu: izinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu kwi-Intanethi namuhla akuyona i-Facebook noma i-Twitter. Eqinisweni, yi-Apple Mail ne-Gmail.
I-imeyili ilapho izinhlamvu zamehlo zikhona, futhi ayihambi, njengoba abanye becabanga. Eqinisweni, i-imeyili inamandla kunanini ngaphambili; imikhiqizo eminingi ihlela ukuthumela ama-imeyili amaningi kulo nyaka futhi iqhubeke nokwanda. Ukumaketha nge-imeyili kune-ROI engu-3800% futhi kushayela ukuguqulwa okuningi kunanoma yisiphi esinye isiteshi. Imiyalezo yokukhangisa inamathuba aphindwe kahlanu okubonakala ku-imeyili kunakuFacebook, kanti i-imeyili isebenza ngempumelelo ephindwe ka-40 yokuthola amakhasimende amasha kune-Facebook noma i-Twitter. Sekukonke, lokho kungamandla amakhulu kakhulu.
Kungani izinga eliphezulu lokubuya kusuka ku-imeyili? Kalula nje, yimikhiqizo yendawo eyodwa enokuxhumana okuqinile, okuqondile nomsebenzisi wokugcina - ukuxhumana okuhlala futhi okungancikile kusiphequluli, idivayisi noma injini yokusesha. Abantu bavame ukugcina ikheli labo le-imeyili isikhathi eside; maningi amathuba okuthi bashintshe ikheli labo lendawo lapho-ke bezoshintsha ikheli labo le-imeyili.
Ngeshwa, kuzo zonke izinzuzo ezilethwa i-imeyili, ukugwema ukuvinjelwa kwesikhangiso ngokumane uthumele ama-imeyili akusinqumi; Kunzima kakhulu ukukhangisa usebenzisa amapulatifomu afana ne-Apple mail noma i-Gmail ngqo. Ngakho-ke ungasasebenzisa kanjani amandla we-imeyili nakho konke okusemandleni okunikezayo?
Thatha ama-eyeballs angakwesokudla kuma-imeyili ezincwadi
Enye indlela ukubeka izikhangiso ezincwadini zezindaba ze-imeyili ezithunyelwa ngabashicileli asebevele bezithumela ukuhlanganyela, izethameli ezikhethiwe. Abashicileli bezincwadi zezindaba ze-imeyili bafuna izindlela zokwenza imali ngezimoto zabo ezikhona, ukukhulisa isivuno sabo, futhi, ingxenye enkulu, bayakwamukela ukubekwa kwezikhangiso njengendlela yokwenza lokho.
Kubakhangisi, lokhu kusho ukuthi ungafaka izikhangiso ezihlosiwe kakhulu, ezilethwe ngamandla kumikhankaso ekhona ye-imeyili yamakhasimende namathemba, ukuzungeza izivimbeli zezikhangiso ukufinyelela izethameli ezibanjiwe. Okuhle kunakho konke, lezi zilaleli zivulekele kakhulu ukubona okuqukethwe okuthile osekuvele kufakazelwe ukuthi kuyabathakazelisa. Ababhalisele iphephandaba bakhethe ukuthola imiyalezo yokumaketha evela kubashicileli; bayakwethemba futhi bakwazise okuqukethwe ngumshicileli. Ukubeka izikhangiso zakho kulo mongo kukusiza ukuthi ugqoke kulokho kuthenjwa nokunakwa. Udinga nje ukwenza izikhangiso zakho zifanele, zifundise, futhi zikwazi ukungena ezithakazelweni zomfundi ngokwenza ngezifiso.
Ukwenza ngezifiso izikhangiso zakho kulula njengoba usuvele wazi konke mayelana nomfundi ngokukhonjwa kwencwadi yezindaba. Qondanisa okuqukethwe kwesikhangiso sakho nalokhu okuthandwa yilo muntu, okungathandwa, ubuntu nezidingo zakhe, uzokwakha ukuthembana nokuthembeka, futhi ukhulise amazinga wokuchofoza.
Yiba Nokuphoqelela Okwanele Ngokuchofoza-Kuze Kuthathe Isenzo.
Ingxenye esemqoka yokwenza ubuwena ifaka ukuxoxa izindaba. Musa nje ukukhangisa umkhiqizo omusha wasekhaya - yabelana nomfundi izindlela ezinhlanu lo mkhiqizo ozokwenza ngazo izimpilo zabo zibe lula. Musa nje ukukhangisa insizakalo entsha ezokongela isikhathi nokukhathazeka - phakamisa izindlela abazosebenzisa ngazo isikhathi sabo abasanda kuthola ukwenza into abayithandayo.
Lezi zinhlobo zezindaba ezenziwe ngezifiso kakhulu zizoholela abafundi ekhasini lakho lokufika, lapho ungakhipha khona isisombululo senkinga yabo: umkhiqizo wakho. Ngaleso sikhathi, umsebenzisi uyabandakanyeka futhi unentshisekelo, futhi kungenzeka athenge umkhiqizo noma insizakalo yakho.
Ingxenye ehamba phambili - kulula.
Kunezixazululo ezitholakalayo namuhla ezisebenzisa yonke le nqubo yokukhangisa ye-imeyili enamandla. Lezi zixazululo zingakusebenzisana nenethiwekhi elungile yabashicileli bezindaba ezinezithameli ezifanele, futhi zikusize ukuthi uthuthukise okuqukethwe okubhekiswe kukho, okufanelekile okuqinisekisiwe okwenza izilaleli zisebenzisane kahle nomkhiqizo wakho.
Ngokubuka okusha nge-imeyili, isu lesikhangiso elifanele, nozakwethu we-imeyili onamandla, onamandla dlula abavimba - futhi usebenzise amandla weqiniso anikezwa ukukhangisa nge-imeyili.
Izizathu Ezi-7 Zokuhlanza Uhlu Lwe-imeyili nokuthi Ungahlanza Kanjani Ababhalisile